फ्रान्सबाट आएकी युवती चढेको जहाजका ३३ जनामा कोरोना देखिएन
काठमाण्डौ । गत चैत ४ गते फ्रान्सबाट कतार हुँदै फर्किएकी युवती सवार जहाजमा सँगै यात्रा गर्नेमध्ये ३३ जना नेपालीमा कोभिड १९ को संक्रमण नदेखिएको प्रहरीले दाबी गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ का प्रहरी प्रमुख डीआइजी प्रद्युम्न कार्कीले यस्तो दाबी गरेका हुन् । चैत ४ गते फ्रान्सबाट कतार हुँदै करता एयरवेजको विमानमा आएकी १९ वर्षीया युवतीलाई...
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले कोरोना रोकथामका लागि रु. १ लाख दिने
काठमाण्डौ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी सन्दिप लामिछानेले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थापना गरेको राहत कोषका लागि एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसको जानकारी उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुुक अकाउन्टबाट दिएका हुन् । संकटको घडीमा आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न उनले सबैलाई आह्वान समेत गरेका छन्...
पूर्व राजाद्वारा निजी अस्पतालको रबैयाप्रति व्यङ्ग्य–‘संकटका बेला पछि हट्ने कायर हुन्’
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको बेला निजी अस्पतालहरुले देखाएको रबैयाप्रति पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाहले आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार एक ट्वीटमार्फत उनले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुको रबैयाको विरोध गरेका हुन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको अभियानमा निजी क्षेत्रबाट संचालित ठूला अस्पतालहरुले सरकारलाई सहयोग...
नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकको दाबी–‘कोरोना भाइरस अब केही दिनको पाहुना मात्र’
काठमाण्डौ । कोरोनाले सारा विश्व भयभित र आक्रान्त भइरहेका बेला नोबेल बिजेता वैज्ञानिकले चाँडै राहात प्रदान गर्ने दाबी पेश गरेका छन्। ती वैज्ञानिकका अनुुसार कोरोना भाइरस अब केही दिनको पाहुना मात्रै हो । विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरसको प्रभाव अब खत्तम हुुने मोडमा पुुगेको छ । अब आउनेवाला दिनमा माहौल सुधारिँदै जाने छ । नोबेल...
चिकित्सक र स्वास्थ्य प्राविधिकलाई प्रधानमन्त्रीको अपील-'सरकार तपाईसँगै छ, चिन्ता नलिनू'
काठमाण्डौ । पूर्ण लकडाउनको तेश्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अहोरात्र खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्य प्राविधिकलाई सम्बोधन गर्दै ट्वीट गरेका छन् । ओलीले फोटोसहितको ट्वीट गर्दै चिकित्सक र स्वास्थ्य प्राविधिकहरुलाई कुनै चिन्ता नलिई उपचारमा खटिन आह्वान गरेका छन् । ट्वीटरमा प्रमले लेखेका...
सामान्य फ्लू झै झुक्याउनसक्छ कोरोनालेः कसरी थाहा पाउने संक्रमण, भइहाले के गर्ने ?
काठमाण्डौ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुुसार विश्वका १८६ देशमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट २२ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुुमाइसकेका छन् । नेपालमा पनि ३ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिसकेको छ । सरकारले कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि एक साता देशभर लकडाउन गर्ने निणर्य गरेको छ । कोरोनाबारे मानिसमा विभिन्न खाले भ्रम र त्रास रहेको पाइन्छ...
कोरोना कोषमा एक महिनाको तलब दिने शोभनदेव पन्तको घोषणा, व्यक्तिगत सहयोग गर्ने पहिलो बैंकर
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमीटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले सरकारले स्थापना गरेको कोभिड १९ सहयोग कोषमा आफ्नो एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सहयोग कोषमा आफ्नो एक महिनाको तलब बराबरले हुन आउने ५ लाख ५१ हजार ४१३ रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । हालसम्म बैंकहरुले संस्थागत रुपमा...
काठमाण्डौ । स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले कोभिड १९ को संक्रमण त्रासले देश नै पूर्ण लकडाउनमा भएको अवस्थामा धितोपत्रको दोश्रो बजार कारोबार संभव भए पनि सेटलमेन्ट भने असंभव रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयले बुधबार धितोपत्र बजार समेत खुलाउने आशयको परिपत्र सम्बद्ध निकायहरुमा गरेपछि त्यसले लगानीकर्ता, ब्रोकर, धितोपत्र...
जीवन बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम संकलन कार्य स्थगन गर्न निर्देशन(सर्कुलरसहित)
काठमाण्डौ । बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई बिमाशुल्क संकलन कार्य चैत मसान्तसम्म स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बिहीबार बिमा कम्पनीहरुलाई एक परिपत्र जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन बमोजिम कोभिड १९ संक्रमणको अवधि तत्काल यकिन गर्न व्यवहारिका नभएकोले संक्रमणका कारण प्रभावित जीवन बिमा सम्बन्धी बिमाशुल्क संकलन...
दैनिक मजदूरी गर्ने परिवारका लागि राहात प्याकेज घोषणा, १३ केजी खाद्यान्न घरमै पुर्याइने
बुटवल । दैनिक ज्यालादारी गरी दुई छाक टार्ने अति विपन्न परिवारको अवस्था लकडाउनमा कस्तो होला ? दैनिक मजदूरी गर्ने विकल्प हराएपछि उनीहरुले कसरी छाक टार्दै होलान् ? देशको संघीय सरकारले यो विषयमा चासो नदिए पनि कतिपय स्थानीय सरकारहरुले भने त्यस्ता परिवार लक्षित राहातका प्याकेज घोषणा गर्न थालेका छन्। बिहीबार बिहान रुपन्देहीको तिलोत्तमा...
इतिहासकै ठूलो राहात प्याकेज अमेरिकी सिनेटबाट पास, प्रत्येक अमेरिकीले पाउनेछन् १२०० डलर
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको नयाँ इपीसेन्टरको रुपमा जोखिममा फस्दै गएको अमेरिकाले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन २ लाख करोड डलर बराबरको राहात प्याकेज घोषणा गरेको छ । सिएनएन मनीका अनुसार सो प्याकेज सम्बन्धी प्रस्ताव सिनेटबाट समेत पारित भएको छ । यो खबर बाहिर आएसँगै अमेरिकी सेयर बजार परिसूचक डाउजोन्समा मंगलबार ११.४ प्रतिशतको उछाल...
सीमा जोडिएका ३ देशमा २४ घण्टाभित्र १५७० कोरोना संक्रमितको मृत्यु
काठमाण्डौ । विश्वभर कोरोना संक्रमणको मृत्यु हुनेको संख्या बुलेट ट्रेनको गति झै तीव्र बन्न थालेको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिएको इटली र स्पेनको अवस्था झनै भयावह बनिरहेको छ । त्यहाँ पछिल्लो २४ घण्टामा क्रमशः ६८३ र ६५६ जनाको मृत्यु भएको छ । अमेरिकापछि संक्रमितको मृत्युको संख्या फ्रान्समा समेत ह्वात्तै बढेको छ ।...
लकडाउनको अवधि कम्तीमा एकसाता थप्ने सरकारको तयारी
काठमाण्डौ । सरकारले घोषणा गरेको एकसाता लामो लकडाउनको दोश्रो दिन देशका अधिकांश भूभाग ठप्प रहे । तथापि, काठमाण्डौ उपत्यका बाहेकका कतिपय ठाउँहरुमा नागरिहरु घरभित्र बसेनन्, सरकारको अपील उल्लंघन गर्दै बाहिर निस्किएका दृश्यहरु धेरै देख्न, हेर्न र सुन्न पाइयो । सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन चालेको कडा कदममा नागरिक स्तरबाट साथ दिइएन...
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको नयाँ इपीसेन्टरको रुपमा जोखिममा फस्दै गएको अमेरिकाले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन २ लाख करोड डलर बराबरको राहात प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सिएनएन मनीका अनुसार सो प्याकेजको विषयमा ह्वाइट हाउस र सिनेटबीच सहमति भइसकेको छ । यो खबर बाहिर आएसँगै अमेरिकी सेयर बजार परिसूचक डाउजोन्समा मंगलबार ११.४...
कार्यालयमा यसकारण फैलिनसक्छ कोरोना भाइरस, वर्क फ्रम होम अत्यावश्यक
काठमाण्डौ । चीनको वुुहान सहरबाट कोरोना भाइरस सुुरु भएको थियो, जसले अहिले महामारीको रुप धारण गरिसकेको छ । अहिलेसम्म विश्वका १४० बढी देशमा कोरोना भाइरसको चपेटाबाट गुुज्रनुु परेको छ । यो भाइरसले अहिलेसम्म १९ हजार १ सय जना मानिसको मृत्युु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कोरोनाबाट बच्न सामाजिक दूूरी कायम गर्नुुपर्छ र लाखौं मानिसहरु घरबाटै...